Ciidamada Komandos-ka iyo kuwa Puntland oo gacanta ku dhigay gaari uu saarnaa hub sharci darro ah | Faafan News
Ciidamada Komandos-ka iyo kuwa Puntland oo gacanta ku dhigay gaari uu saarnaa hub sharci darro ah
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa lagu qabtay gaari nooca Toyota Landcruiser, kaasi oo ay saarnaayeen hub iyo rasaas sharci darro ah, kaddib markii ay howlgal wadajir ah magaalada ka fuliyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo.
Sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Gaalkacyo howlgalkaasi ayaa waxaa fuliyay ciidamada Komandos-ka Danab iyo kuwa maamulka Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano PSF-ta.
Gaari ayaa watay Laba Taargo oo kala nooc ah, iyadoona saraakiisha ay ku eedeeyeen in gaarigaasi dilalka lagu fulin jiray.
Sarkaalka hoggaaminayay ciidamada howlgalka sameynayay ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay sarkaal ajnabi ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna magacaabo Saciid C/llaahi Al-Suudaani.
Guriga laga soo qabtay sarkaalka oo uu lahaa nin lagu magacaabo Nuur Deeq ayaa isna la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, inkasta oo wararku aanay sheegin in milkiilaha guriga isna la soo qabtay.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in howlgalkaan uu ka mid yahay howlgallo maalmahaan ka socday gobolka Mudug, inkasta oo maamulka Galmudug uu si weyn u dhaliilay howlgaladaasi isla markaana aan lagu soo wargelin mar kasta oo la qaadayo howlgalada noocaan oo kale ah.